I-Sea Breeze Cottage- Ulonwabo loSapho Kufuphi noLwandle - I-Airbnb
I-Sea Breeze Cottage- Ulonwabo loSapho Kufuphi noLwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBronwyn
Eli khaya linobuhlobo bosapho lihlala ekupheleni kwendawo ezolileyo ye-de de sac. Kulula ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni, kwiindawo zokudlala, kwindawo yokutyela kunye nebar. Le bach yesimbo sekiwi inekhabhathi yokulala, kwaye iya kubonelela ngeeyure zolonwabo kulo lonke usapho.
Indawo yokuphumla ebanzi enekhitshi epheleleyo yenye yeempawu zeli khaya lifudumeleyo litofotofo.
Icandelo labucala elibiyelwe ngokupheleleyo, elinendawo eninzi yokupaka iimoto okanye isikhephe esitratweni.
Relaxed on the deck with drink, uphulaphule isandi samaza.
Ilungele abantu abatshatileyo, iintsapho okanye abahlobo-iSea Breeze Cottage likhaya lakho kude nekhaya kwaye ibandakanya:
* Icandelo elikhulu labucala elineendawo zengca ukuze usapho lulonwabele.
* Ukuhambahamba ngokulula ukuya elunxwemeni ngendlela yokufikelela kawonke-wonke ukuya kuLwandle oluPhambili lwaseKaka Point. Olu lwandle luqubha lugadwa ngabahlanguli ehlotyeni.
* Imidlalo yebhodi kunye nezixhobo zemidlalo ezikhoyo.
* Isitshisi soMlilo esiCozy Wood.
* Esi sisiseko esihle sokuhlala ngelixa uphonononga imimangaliso ebukekayo yendawo yaseCatlins, iLighthouse kunye nengingqi ejikelezileyo.
Kukho amagumbi amabini okulala endlwini kwaye elesithathu yikhabhathi yokulala engancanyathiselwanga endlwini kodwa kwipropathi emalunga neemitha ezi-5 kude.
Lo ngomnye umzekelo we-kiwi style bach, ikhaya elisetyenziswa ngabantu baseNew Zealand kwiiholide zeentsapho zabo. Azizintsha kraca kwaye azibukeki njengeeyunithi zemotele kodwa zingamakhaya atofotofo kakhulu
Akukho mgaqo-nkqubo weqela ngokungqongqo usebenzayo.
Ibekwe kwindawo enobuhlobo kwisitrato esizolileyo.
Kufuphi nevenkile yokutyela, ibha, indawo yokudlala kunye neengoma zasehlathini.
Ukuhamba lula (akukho zinduli) imizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni ngendlela yokufikelela yoluntu. Kukho indawo yokuqubha ekhuselekileyo egadwe ngoonogada ngempelaveki nangeeholide.
Ukusefa, ukuQubha, ukuLoba, ukuDiva, ukukhwela iKayaking, ukuHamba iHashe nokukhwela iHashe.
I-Nugget Point Lighthouse -uhambo lwemizuzu eli-13 ukusuka eKaka Point - luhambo olumangalisayo olunemibono eninzi kunye nezilwanyana zasendle. Unokubona amatywina kunye noonombombiya abanamehlo atyheli.
Ezinye izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya ziquka iTunnell Hill, iMatai Falls, Cannibal Bay, Purakaunui Falls, Roaring Bay, McLean Falls nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Bronwyn
Ipropathi yethu i-minder iyafumaneka ukuba ufuna nantoni na. Umnikazi ukwafumaneka ngetekisi ukunceda xa ufuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kaka Point